Kuyini ukumaketha ngamagciwane? Ezinye Izibonelo nokuthi Kungani Basebenza (noma Abangasebenzi) | Martech Zone
Ngokwaziwa kwezinkundla zokuxhumana, ngithemba ukuthi iningi lamabhizinisi lihlaziya yonke imikhankaso abayenzayo ngethemba lokuthi izokwabiwa ngomlomo ukuze kwandiswe ukufinyelela kwayo namandla.
Kuyini ukumaketha ngamagciwane?
Ukumaketha ngegciwane kubhekisa kunqubo lapho osomaqhinga bokuqukethwe beklama ngamabomu okuqukethwe okungahambiseka kalula futhi okubandakanya kakhulu ukuze kwabelwane ngakho ngokushesha ngabantu abaningi. Imoto iyinto esemqoka - isidingo sokuthi ophakathi asabalale ngabantu kunokuba akhokhe imali eningi yokuphromotha noma yokudlala i-airplay. Amavidiyo ahlekisayo athandwa kakhulu, kepha kukhona nama-meme wesithombe, kanye nezikhuthazo ezabiwe ezisebenza njengezaphulelo zeqembu.
Nasi ukubuka konke okuhle kwesikhathi seCycle
Kusukela U-Emerson Spartz, uchwepheshe we-Internet virality.
Izibonelo Zemikhankaso Ye-Viral Marketing
Ijuba Langempela (ly) Elihle
I-Volvo Trucks noJean-Claude Van Damme.
Okuzala Ama-Delov Digital's Uhlobo lwedijithali lweChuck Norris
Futhi 22 Jump Street's inguqulo noChanning Tatum.
I-infographic kusuka ku- Iziqu Zokumaketha ezihamba phambili ibuye inikeze ngamathiphu wokuthi yini esiza okuqukethwe ukuthi kubhebhetheleke nokuthi yini okufanele uyigweme lapho usungula umkhankaso owenzelwe ukusakazeka kalula.
Tags: Ividiyo ye-Channing Tatum yegciwaneijuba ubuhle bangempelaijuba umkhankaso wegciwanei-emerson spartzjean-claude van damme ividiyo yegciwaneokuqukethwe kwegciwaneukumaketha kwamagciwaneisu le-virusividiyo yegciwaneamaloli wevolvo igciwane levidiyoyini okuqukethwe yigciwanekuyini ukumaketha ngegciwane
Izibalo Namathrendi Amabhizinisi Ka-2014 KumaSocial Media
I-MyYappyDog: I-CRM Yezenhlalo Yama-Real Estate Agents
I-Oct 6, i-2014 ku-4: i-42 PM
Ukuthandile ngempela lokhu okuthunyelwe! Ngizobe ngibhekisa kuyo njengoba sihlela isu lethu lokumaketha okuqukethwe.
I-Oct 6, i-2014 ku-9: i-14 PM
Ngiyayithanda indlela osho ngayo ukuthi akufanele sihlele emizamweni yethu yokuba negciwane. Ngale ndlela izisekelo zikhuliswa, futhi imininingwane ihlelwe kahle. Ukuhlanganisa umcimbi wamanje kungaba ukwenziwa noma ukugqashuka emzamweni oya egazini noma cha, umcabango othakazelisayo.
I-Oct 6, i-2014 ku-11: i-42 PM
UZack - impela. Ngisho nochwepheshe abasebenza emikhankasweni yokukhangisa ngegciwane bayazi ukuthi kunengozi yokungayi. Ngaleso sizathu, sisebenza ukuqinisekisa ukuthi imikhankaso yethu ihlala ifaka uhlobo oluthile lwenani kunokumane sizame ukuhlekisa noma ukuxaka. Ngaleyo ndlela, uma zindiza, zisenganikeza inani elithile kuzithameli ezifanele ezifinyelelwe!
Okthoba 9, 2014 ngo-6: 56 AM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu. Ngakujabulela kakhulu. Siyabonga ngokwabelana ngalezi zibonelo. Kunokuzikhandla okukhulu nobungozi obubandakanyekile ekukhangiseni ngegciwane. Kuyishwa, uma kungangeni egazini kepha ngiyavuma ngokuphelele ukuthi akufanele sihlele umkhankaso sicabanga ukuthi uzoba negciwane. Ngibheke phambili kokuthunyelwe okuthakazelisa okunjalo.
Nov 4, 2016 ngo-8: 55 PM
Isibonelo esihle kakhulu sokumaketha kwamagciwane